Fikambanana Ifanampiana - Ny fiantrana tanora tanora indrindra i Sheffield
Tanora fiantohana tanora tsy maka tombombarotra mifototra ao Sheffield, manome fampandrosoana, hetsika sosialy sy programa ho an'ny tanora ho an'ny tanora sy olon-dehibe mora vidy. Tiantsika ny hamporisika ny tanora hanovaova ny fiarahamoniny, hanangana ny tanjony ary ho lasa modely ho an'ny namany.
Ianao ve no 15 - 17 ary mitady ny ankamaroan'ny fahavaratra?
Miaraha amin'ny NCS noho ny traikefa lehibe! Mahita olona vaovao, mamelà ny fiainan'ny namana ary mahazo fahaiza-manao vaovao ho an'ny CV.
Fantaro bebe kokoa momba ny NCS
Fantaro ny zavatra niainan'ny olona hafa
Ry ray aman-dreny sy mpiambina
Manan-janakalahy ve ianao, sa mianatra tanora?
Fantaro ny fomba ahafahan'ny programan'ny 2019 NCS hanome azy ireo fahavaratra sy fahaiza-manao izay tsy hohadinoiny.
Ny FAQ momba ny traikefa
Mora kokoa noho izay mety eritreretinao izany
Sekoly sy mpampianatra
Olona miara-miasa amin'ny tanora ve ianao?
Fantaro ny fomba ahafahan'ny programan'ny NCS hampiditra azy ireo amin'ny traikefa vaovao, hampivelatra ny fahaiza-manao vaovao ary hamolavola namana vaovao.
Fampahalalana misimisy kokoa momba anay
Fahatelo sy vanim-potoana maharitra
Manana finoana matanjaka 3 isika
Amin'ny fanohanana sy ny finoan'ny tena manokana, ny tanora dia afaka mahatratra ny tsy mampino
Amin'ny maha-fiantrana tanora antsika dia fantatsika fa amin'ny alalan'ny fitaovana havanana, toerana sy fanohanana, dia azo tanterahina ny tsy mampino.
Ny ohatra sasantsasany amin'ireo tanora izay mahatratra ny tsy mampino amin'ny Elector Society dia ny hoe: kitapo fanatanjahantena, fivarotana amin'ny toeram-pivarotana, famolavolana sy fandaminana, miady amin'ny fampijaliana sy fanavakavaham-bolon-koditra, ny fifehezana ny fahafahana miditra ary ny sisa. Inona no hitranga aminao fa ireo tombontsoa ireo dia tsy ny mpandàla ny mahazatra ihany fa ny olon-drehetra.
Manome ny tanora ny tena hery haka ny hetsika tsara eo amin'ny fiaraha-monina misy azy ireo
Manomboka ny fananganana tetikasa vaovao hanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny fiaraha-monina isika. Ny tanora dia ivon'ny fampandrosoana vaovao rehetra amin'ny maha-fiantrana tanora antsika.
Ny sasany amin'ireo tetikasa ataonay dia ny tanora ao Sheffield sy South Yorkshire. Na dia maro amin'ireo tetikasanay aza dia misy tanora mandroso amin'ny mpandray anjara mba handoavana anjara. Ny tetik'asa rehetra ataonay dia manana tanora mandray anjara amin'ny dingana rehetra - avy amin'ny hevitra sy ny famolavolana, ny fandefasana sy ny fanombanana.
Mampiroborobo ny tanora ho modely tsara ho an'ireo manodidina azy
Ny fahafantarana fa ny modely ho an'ny mpampianatra dia fitaovana matanjaka amin'ny fampivelarana tanora hafa dia fototry ny ankamaroan'ny fomba fiasantsika.
Noho izany dia manome toerana sy fahafahana handray anjara amin'ny fiantrana isika ao anatin'ny andraikitra izay ahafahan'izy ireo modely tsara. Anisan'izany ny maha mpikambana ao amin'ny Biraon'ny Tanorantsika izay mamolavola ny paikan'ny fikambanana sy ny fitantanana ny tetikasa. Izany dia iray amin'ireo fomba maro izay ahafahantsika mametraka fenitra mikasika ny fanao tsara indrindra amin'ny fiantrana tanora.
Raha mizara ny fahitantsika sy ny faniriana tsy manam-petra isika mba hampisy fiantraikany tsara eto amin'izao tontolo izao, azafady mifandray. Lazao anay ny momba ny hevitrao sy ny traikefanao, na te hiara-hiasa aminay amin'ny zavatra ataonareo, na ho anay amin'ny zavatra ataonay.
Antsoy izahay - 0114 2999 210
Ny mpiara-miasa sy ny mpanohana dia ahitana:
EFL TRUST // NCS TRUST // CABINET OFFICE // SHEFFIELD FUTURES // BIG LOTTERY // TSY MANAIKY IZANY // SHEFFIELD HALLAM // UNIVERSITY OF SHEFFIELD